Zawgyi ဘာလဲ? Unicode ဘာလဲ?
Zawgyi သည်​ international unicode စည်းမျဉ်းကို မလိုက်​နာသည့်​အပြင်​ တိုင်းရင်းသားဘာသာစကား၏​ ​ကုဒ်​ကိုသုံးထားသည့်​အတွက်​ အမြန်​စွန့်​ပယ်​သင့်​ပြီဖြစ်​သည်​ unicode myanmar font ကို ​ပြောင်​လဲအသုံးပြုသင့်​ပြီ ဖြစ်​ပါသည်​။
အ​ခြေခံအားဖြင့်​​တော့ ကွန်​ပျူတာ​တွေဟာ ကိန်းဂဏန်း ​တွေနဲ့သာ လည်​ပတ်​​နေတာ ဖြစ်​ပါတယ်​ ကွန်​ပျူတာ​တွေဟာ အက္ခရာ​တွေနဲ့ အခြား​သော သ​င်္ကေတ​တွေကို ကုဒ်​ဂဏန်း​တွေ အဖြစ်​နဲ့သာ ​ပြောင်းလဲ၍ သိမ်းဆည်းပါတယ်​
Unicode မ​ပေါ်ခင်​က ၄င်းအက္ခရာ​တွေ အမှတ်​အသား​တွေကို ​ပြောင်းလဲတဲ့ကုဒ်​စနစ်​က ရာ​ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်​ တစ်​ခုနဲ့တစ်​ခုလည်း မတူကြပါဘူး ဒီလိုမတူတဲ့အတွက်​ Language တစ်​ခုက​နေ အခြားတစ်​ခုကို Translate လုပ်​ တဲ့အခါမှာ အခက်​အခဲ​တွေ စဖြစ်​​တော့တာပါပဲ ဥပမာ​ပြောရရင်​ Myanmar3နဲ့​ရေးထားတဲ့စာ​တွေကို Zawgyi တင်​ထားတဲ့ ဖုန်း​တွေ ကွန်​ပျူတာ​တွေမှာ ကိုးယို့ ကားယား ​တွေလာ​ပေါ်​နေပြီး ဖတ်​မရတာမျိုးပါ
အဲဒီပြသနာ​တွေအားလုံးကို Unicode က​နေ အ​ဖြေရှာလို့ရခဲ့ပါပြီ Unicode ဆိုတာက Universal Encoding System ကို​ဖော်​ညွှန်းပါတယ်​ စကြ၀ဠာသုံးကုဒ်​​ပြောင်းလဲစနစ်​ ​ပေါ့
Unicode စနစ်​ဟာ အမှတ်​သ​င်္ကေတတိုင်း အက္ခရာတိုင်းအတွက်​ ပြိုင်​ဘက်​ကင်း သီးသန့်​ကုဒ်​နံပါတ်​​တွေကို ထုတ်​​ပေးပါတယ်​ ဒါ​ကြောင့်​ မည်​သည့်​ Platform မည်​သည့်​ Program မည်​သည့်​ဘာသာစကား ကိုဖြစ်​ဖြစ်​ မှန်​မှန်​ကန်​ကန်​ ကုဒ်​​ပြောင်းလဲပြီး ​ဖော်​ပြ​ပေးပါတယ်​
Unicode စံနှုန်း​တွေကို နည်းပညာ​ရှေ့​ဆောင်​ ကုမ္ပဏီကြီး​တွေဖြစ်​တဲ့ Apple, HP, IBM, JustSystems, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys စသည့်​ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီများစွာမှ အတည်​ပြုထုတ်​ပြန်​ ​ပေးတာ ဖြစ်​ပါတယ်​
​မြောက်​များစွာ​သော Operating System ​တွေ Modern Browser ​တွေနဲ့ အခြား​သော Product များစွာဟာ Unicode ကို အ​ထောက်​အပံ့​ပေးပါတယ်